कृष्ण ब’हादुर महरा नि’र्दोष रहेको अदालतको फै’सला ! – Khabarhouse
कृष्ण ब’हादुर महरा नि’र्दोष रहेको अदालतको फै’सला !
Khabar house | ५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०९:०२ | Comments
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा नि’र्दोष रहेको फैसला गरेको छ । ब’ला’त्कार प्रयासको आ’रोपमा पु’र्पक्षमा डिल्लीबजार का’रागार रहेका महरा आजै रि’हा हुने भएका छन्। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इ’जलासले महरा नि’र्दोष रहेको फै’सला गरेको हो ।
महरा वि’रुद्ध सरकारी वकिलले र महराको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, डा। दिनमणि पोखरेल, कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, लव मैनाली, मुरारी सापकोटा लगायतले बहस गरेका थिए । संसद सचिवालयकी कर्म चारी रोशनी शाहीलाई ब’ला’त्कार प्रयास गरेको आ’रोपमा महरा प’क्राउ परेका हुन् ।
उनी वि’रुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पु’र्पक्षका लागि थु’नामा पठाउने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश वि’रुद्ध उच्च अदालत पुगे पनि उच्च अदालत पाटनले एक महिना भित्रै मुद्दाको टुंगो लगाउन आदेश दिएर जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । असोज १९ गते प’क्राउ परेका महरा कात्तिक १८ देखि पु’र्पक्षका लागि डिल्लीबजार का’रागार चलान भएका थिए ।
महरामाथि असोज १२ गते शाहीलाई ब’ला’त्कारको प्रयास गरेको आ’रोप लागेको थियो । सुरुमा महराले आफुलाई ब’ला’त्कारको प्रयास गरेको आ’रोप लगाएकी शाहीले त्यस पछि भने निरन्तर आ’रोप अ’स्वीकार गर्दै आएकी छन् । उनी महरा नि’र्दोष रहेको भन्दै जिल्ला र उच्च अ’दालत समेत पुगेकी थिइन् ।